ရောင်းနေတာ အချိန်တစ်ခုရှိနေပေမယ့် မပြင်ပေးနိုင်သေးတဲ့ Google Pixel 3
9 Nov 2018 . 5:06 PM
စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်ခုထွက်လာပြီဆိုရင် နောက်ကအရေးကြီးတဲ့အချက်က Service ပိုင်းပါ။ ဖုန်းအသစ်ထွက်လာပြီးမှ တကယ်လို့ တစ်ခုခုအထိအခိုက်ရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုရင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် လွယ်ကူဖို့ကလည်း အဓိကစဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်ပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း Google က နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Google Pixel3ဖုန်းတွေကတော့ တခြားသော စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ ယှဉ်မယ်ဆိုရင် ဝယ်ယူဖို့မလွယ်ကူသလိုမျိုးပဲ ပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလည်း အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့ပုံပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လက်ရှိ Google Pixel3ဖုန်းတွေကို Google ကိုယ်တိုင်ကတောင်မှ ပြင်ဆင်နိုင်ပုံမရသေးလို့ပါ။
Google ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလတုန်းက Mail-in Repair Center တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်အထိ Pixel 1st Generation နဲ့ Pixel2ဖုန်းတွေကိုပဲ Support ပေးနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Pixel3စမတ်ဖုန်းတွေကို မိတ်ဆက်ခဲ့တာအခုဆိုရင် အချိန် ၁ လလောက်ရှိနေပေမယ့် Google ရဲ့ Repair Center ကိုယ်တိုင်က ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ပုံပါပဲ။
အဲ့ဒီအတွက်လောလောဆယ်မှာ Google Pixel3ဖုန်းတွေကို ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင် US မှာရှိတဲ့ uBreakiFix ဆိုင်တွေမှာပဲ ရရှိသေးပြီးတော့ အခုပြင်ဆင်နိုင်တာကလည်း Screen ဒါမှမဟုတ် Body Housing ကိုပဲ ပြင်ဆင်နိုင်သေးတာဖြစ်ပြီးတော့ အရောင်အနေနဲ့လည်း Not Pink အရောင်တစ်ခုပဲရရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိသိရတဲ့သတင်းတွေအရလည်း Google ကိုယ်တိုင်က Repair Center တွေအတွက် Battery ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့အပိုပစ္စည်းမထောက်ပံ့နိုင်သေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအချိန်မှာ Google Pixel3ဖုန်းတွေ ဝယ်ယူဖို့အတွက်စဉ်းစားနေရင်တော့ သေချာကို မတော်တဆမပျက်စီးအောင် ကိုင်တွယ်ဖို့လိုမှာပါ။
စမတျဖုနျးအသဈတဈခုထှကျလာပွီဆိုရငျ နောကျကအရေးကွီးတဲ့အခကျြက Service ပိုငျးပါ။ ဖုနျးအသဈထှကျလာပွီးမှ တကယျလို့ တဈခုခုအထိအခိုကျရှိသှားခဲ့တယျဆိုရငျ ပွနျလညျပွငျဆငျဖို့အတှကျ လှယျကူဖို့ကလညျး အဓိကစဉျးစားသငျ့တဲ့အခကျြပါ။
ဒါပမေယျ့လညျး Google က နောကျဆုံးထှကျထားတဲ့ Google Pixel3ဖုနျးတှကေတော့ တခွားသော စမတျဖုနျးတှနေဲ့ ယှဉျမယျဆိုရငျ ဝယျယူဖို့မလှယျကူသလိုမြိုးပဲ ပွနျလညျပွငျဆငျတဲ့နရောမှာလညျး အခကျအခဲတှရှေိနတေဲ့ပုံပါပဲ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ လကျရှိ Google Pixel3ဖုနျးတှကေို Google ကိုယျတိုငျကတောငျမှ ပွငျဆငျနိုငျပုံမရသေးလို့ပါ။
Google ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလတုနျးက Mail-in Repair Center တဈခုကို ဖှငျ့လှဈခဲ့ပမေယျ့ အခုအခြိနျအထိ Pixel 1st Generation နဲ့ Pixel2ဖုနျးတှကေိုပဲ Support ပေးနိုငျသေးတာဖွဈပါတယျ။ Pixel3စမတျဖုနျးတှကေို မိတျဆကျခဲ့တာအခုဆိုရငျ အခြိနျ ၁ လလောကျရှိနပေမေယျ့ Google ရဲ့ Repair Center ကိုယျတိုငျက ပွငျဆငျနိုငျခွငျးမရှိသေးတဲ့ပုံပါပဲ။
အဲ့ဒီအတှကျလောလောဆယျမှာ Google Pixel3ဖုနျးတှကေို ပွငျဆငျမယျဆိုရငျ US မှာရှိတဲ့ uBreakiFix ဆိုငျတှမှောပဲ ရရှိသေးပွီးတော့ အခုပွငျဆငျနိုငျတာကလညျး Screen ဒါမှမဟုတျ Body Housing ကိုပဲ ပွငျဆငျနိုငျသေးတာဖွဈပွီးတော့ အရောငျအနနေဲ့လညျး Not Pink အရောငျတဈခုပဲရရှိသေးတာဖွဈပါတယျ။ လကျရှိသိရတဲ့သတငျးတှအေရလညျး Google ကိုယျတိုငျက Repair Center တှအေတှကျ Battery ကလှဲပွီး ကနျြတဲ့အပိုပစ်စညျးမထောကျပံ့နိုငျသေးဘူးလို့ သိရပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဒီအခြိနျမှာ Google Pixel3ဖုနျးတှေ ဝယျယူဖို့အတှကျစဉျးစားနရေငျတော့ သခြောကို မတျောတဆမပကျြစီးအောငျ ကိုငျတှယျဖို့လိုမှာပါ။
by Zawyè . 16 hours ago